China Computer Desk YF-GD002 Manufacturer and Supplier | Yifan
Kọmputa oche YF-GD002
MGBE ECHICHE: Dị nro na nke oge a, desktọpụ ụlọ ọrụ ọcha a na-acha ọcha bụ njikọta nke arụmọrụ, nkwụsi ike na imewe n'oge a.
Atụmatụ 4 Drawers, 1 keyboard tree
Isiokwu oge 43.3 x 19.68 x 29.52 sentimita asatọ
Oche a na-ede akwụkwọ ebe a na-ede akwụkwọ na-eweta ihe ndozi 3 maka ihe ịde ederede gị niile. Ihe ntinye 3 niile na ngbanye igwe di mfe maka oghe di nma. N'akụkụ ọzọ nwere nnukwu ebe nchekwa. Ọ bụrụ n ’ịtọlite ​​ọfịs ọgbara ọhụrụ n’ụlọ gị ma chọọ mmechi mmechi ahụ, tebụl a nwere ike ịbụ maka gị.
Lọ ọrụ kọmpụta ebe a na-arụ ọrụ siri ike ma sie ike site na nnukwu ike dị ogologo oge.
Inogide ewuru site na ígwè nchara (igwe anaghị ata nchara na ọlaọcha, ma ọ bụ nchara nchara na oji / ọla ọcha).
Enwere nhọrọ 2 maka imecha elu: otu dị elu na-acha ọcha glossered na-acha ọcha, ọzọ bụ osisi ọka melamine veneered imecha. Elu dị mfe iji hichaa ya na atụmatụ ya na mgbochi ọkọlọtọ, ọkụ ọkụ, nkwanye mmiri.
AMAL WORR: SLỌ :LỌ: Ebe sara mbara zuru oke na ogologo ya: obere nha 120cm, ọkara 140cm, nnukwu nha 160cm, 60cm obosara; ọtụtụ ohere maka laptọọpụ, ngwa nbipute, ihe ederede na ngwa ndị ọzọ gụnyere kọfị gị
Site na nhọrọ ndị a na ịmecha nhọrọ, ị nwere ike ịchọta ụcha dị mma, ezigbo ihe na ogo maka mma ụlọ gị.
Nke a sleek dịkọrọ ndụ na kọmputa na desktọọpụ na mfe na ndị bara uru imewe bụ zuru okè n'ihi na gị oge a n'ụlọ ma ọ bụ studio.
Site na kọmpụta kọmpụta kọlọs na-arụ ọrụ a, ọ ga-abụ ezigbo ahụmịhe iji rụọ ụdị ụlọ.
Akwa kọmputa kọmpụta.
Style: Ọgbara ọhụrụ nke oge a.
Elu Emechara na a mara mma elu gloss ọcha / osisi ọka melamine laminated.
Isiokwu ụkwụ ihe: igwe anaghị agba nchara na ọlaọcha.
Desktop ihe: Mere si Strong urughuru osisi.
3 na-ese ihe na-eji ire ụtọ metal slide.
Zuru okè maka ụlọ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla.
Nke gara aga: Kọmputa oche YF-GD-001
Osote: Kọmputa oche YF-GD003
White ide ọmụmụ desktọọpụ home offi ...
Kọmputa oche YF-CD002
Oge a na-ede akwụkwọ desk nke oge a na boo ...